Daawo:-Xildhibaan loo diiday in uu ka dhoofo Garoonka Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion. Daawo:-Xildhibaan loo diiday in uu ka dhoofo Garoonka Muqdisho * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By Ardaan Yare on 25th November 2019
Xildhibaan Dalays Xasan Adan oo katirsan Golaha Shacabka Soomaaliya ayaa Maanta waxaa ay sheegtay in saakay loo diiday inay ka dhoofto Garoonka Diyaaradaha Aadan-Cadde ee Magaalada muqdisho,xilli ay dooneysay inay safar ku aado deegaano katirsan gobolka Gedo.
Kulankii Maanta ee golaha Shacabka ayaa ka hor sheegtay in fasax muddo 10 Cisho ah ka qaadatay guddoonka Golaha Shacabka si ay u aado degmada Luuq oo ay deegaan ahaan kazoo jeedo,hayeeshee saakay loo sheegay inaysan bixin Karin oo ay heysato Hay’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka.
Baarlamaanka Soomaaliya ayay ka dalbatay in loo soo cadeeyo sababta saakay loogu diiday inay ka dhoofto Garoonka Diyaaradaha Aadan-Cadde ee Magaalada muqdisho,xilli ay dooneysay inay safar ku aado deegaano katirsan gobolka Gedo.